आफ्नै श्रीमती संग…. सम्बन्ध राखेको थाहा पाएपछी – Dainiki Online
12/03/2021 12/03/2021 adminLeaveaComment on आफ्नै श्रीमती संग…. सम्बन्ध राखेको थाहा पाएपछी
रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–६, गुलरियाका २६ वर्षीय दिनेश लोधको ज्या न लि एको अभियोगमा प्रहरीले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–७ बाट रामवरण यादवलाई रुपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेकोे छ । आफ्नै श्रीमतीसँग यौ नस म्बन्ध राखेको थाहा पाएपछि यादवले लोधको ज्या न लि एको प्रहरीको दाबी छ ।
गत मङ्सिर १७ गते बिहान ७ः३० बजे गैडहवा गाउँपालिका–६ स्थित पर्सा कलौनी सडक खण्डको पूर्वी किनारमा लोधको शव फेला परेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र महतका अनुसार पक्राउ परेका यादवले ज्य न लि एको आफूले गरेको स्वीकार गरेका छन् । लोधको टाउकोमा ग म्भीर चो ट ला गेको,नाक र मुखबाट र ग त बगेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।
प्रहरीले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । घटनास्थलबाट उठाइएको सबुद प्रमाण, प्राविधिक पक्षको विश्लेषणलगायत अन्य अनुसन्धानबाट लोधको ज्या न लि एको रामवरण यादवबाटै भएको खुल्न आएको प्रहरीको दाबी छ । यादवमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति लिएको प्रहरी निरीक्षक महतले बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।